OKUFANELE KUQASHWE UMA KUFAKWA IMPAHLA YOBUCHWEPHESHE BENKONZO-News-NingBo COFF Machinery Co., ltd
YINI OKUFANELE IQASHWE UMA KUFAKWA IZINTO ZOBUTSHA BOBUCHOPHO
Isikhathi: 2020-07-09 Amazwana: 41
Bayanda abantu abaqala ukuthanda ukuphuza ubhiya wobuciko. Abaphathi nabo bahlose emakethe yobhiya wobuciko futhi bathenge imishini kabhiya wobuciko. Yini oyaziyo ngokuqapha kokufakwa kwemishini yobhiya wobuciko?
Okokuqala, izofakwa ngofaka izifaki zobhiya wobuchwepheshe!
Umnikazi othenge imishini yobhiya wobuciko, ungafaki futhi ulungise okokusebenza kukabhiya, iNing Bo Coff Machinery CO., LTD inethimba lokufaka imishini elungisiwe nokulungisa iphutha ukuze likusize ukufake.
Ngaphezu kwalokho, kufanele kubhekwe imvelo yokufaka imishini yobhiya wobuciko, njengamapayipi kanye nokuthuthwa kwendle. Uma umshini wakho wobhiya wobuciko ungafakiwe esitezi sokuqala kepha esitezi sesibili noma kwenye indawo, cabanga ngomthamo wokuthwala umthwalo we indlu nokubeka amanzi namapayipi amanzi.
Okokugcina, ukufakwa kwemishini yobhiya kuyisidingo sokucabanga ukuthi kulula ukusebenzisa: yize umshini wobhiya wobuciko usebenzisa nsuku zonke inani labangabaningi, kepha uma singanaki okokusebenza kokukhishwa okunjengendawo, angavela ngokwakhe lapho esebenzisa imishini ayikho lula, awubeki ngokoqobo okokusebenza ukuze wonge isikhala semishini kabhiya.
Previous: Ibhokisi Lithatha Ingxenye Embukisweni We-Inthanethi
Okulandelayo: I-Red Ale (ibhali)